Inona no jerena ao Amman, renivohitr'i Jordania | Vaovao momba ny dia
Inona no ho hita any Amman, renivohitr'i Jordania
Mariela Carril | | Jordania, Inona no ho hita
I Jordania dia iray amin'ireo firenena mpizahatany indrindra eto amin'ity faritra ity ary iray amin'ireo fifandraisana tsara indrindra amin'i Etazonia. Ny fanjakan'i Hashemite of Jordan dia eo amoron'ny reniranon'i Jordania ary manamorona ny Irak, Arabia Saodita, Israel, Palestine, ny Ranomasina Mena ary ny Ranomasina Maty, ka eo amin'ny toerana be mpankafy tantara io.
Amman no renivohitr'i Jordania ary ny vavahady mankamin'ity firenena ity izay fantatry ny maro tamin'ny fisehoan'ny Mpanjakavavy Rania tamina magazine Hola! Io no tanàna misy mponina betsaka indrindra ary raha jerena ny Moyen Orient dia malalaka sy somary andrefana izany. Noho izany tanàna izay ahitan'ny mpizahatany vahiny aina. Androany dia lasa iray amin'ireo tanàna arabo be mpitsidika indrindra izy, koa eto izay rehetra hitanao sy ataonao ao Amman.
2 Fizahantany Amman
Amman dia any amin'ny faritra lemaka iray ary natsangana tamin'ny havoana fito tany am-boalohany ka ny toetran'ny tendrombohitra dia mbola mampiavaka azy hatrany Ankafizo a toetrandro somary maina ka na amin'ny lohataona aza dia manakaiky ny 30 ºC ny mari-pana. Mafana matetika ny fahavaratra ary manomboka ny ririnina rehefa tapitra ny volana Novambra. Mangatsiaka matetika izy io ary mety ho lanezy amin'ny onja mangatsiaka.
Ny 42% -n'ny mponina Jordaniana no monina eto ary izy dia mponina manana fifindra-monina betsaka. Misy taranaky ny Arabo sy Palestiniana ary tonga hatrany izy ireo. Ny ankamaroan'ny mponina ao aminy dia Sini Muslim ary izany no mahatonga ny moske maro. Misy koa ny Kristiana, na dia vitsy an'isa aza izy ireo. Amman tanànan'ny tranobe ambany izy io, afa-tsy eo afovoany izay nananganana tilikambo maoderina sasany ary misy vera marobe. Ireo tranobe honenana dia tsy mihoatra ny rihana efatra ary matetika misy lavarangana sy lavarangana.
Misy ny toeram-pivarotana andrefana, fivarotana, trano fisakafoanana ary fisotroana na aiza na aiza lavitra be dia ho tranonkala mpandala ny nentin-drazana.
I Amman dia tanàna misy tantaram-piainana an-jatony ka manana toko prehistorika, koa grika, romana, Ottoman, na anglisy aza, mandra-pahazoany ny fahaleovantenany. Izy io dia manana rafitra fitateram-bahoaka tsara, nohavaozina vao haingana, ka afaka mifindra amin'ny bus ianao rehefa tonga any amin'ny seranam-piaramanidina iraisampirenena roa. Ny làlambe lehibe eto an-tanàna dia misy boriborintany valo ary na dia mikorontana aza ny fifamoivoizana dia somary mora ihany ny mitondra ny fitondrana anao.
Inona avy ireo toerana fizahan-tany any Amman? Azontsika atao ny miresaka momba ireo zava-dehibe indrindra, dia ireo izay tsy tokony halainao mihitsy: ny Citadel, ny amphitheater romana, ny fandroana Tiorka, ny fivarotana zava-manitra, ny Royal Automobile Museum, ny Jordania Museum, ny Archaeological Museum ary ny Gallery. de Bellas Artes, ohatra. Ho fanampin'ny fitsangatsanganana antoandro izay Petra no tanjontsika voalohany.
Ny mandan'i Amman Eo amin'ny havoana avo indrindra ao an-tanàna, Jebel al-Qala'a, eo amin'ny 850 metatra ny haavony. Ity havoana ity dia nonina hatramin'ny vanim-potoana varahina ary ny trano mimanda dia voahodidin'ny rindrina izay namboarina imbetsaka tao anatin'ny vanim-potoana samy hafa ary 1700 metatra ny halavany. Ao anatiny, ny tsy tokony ho hita dia ny Lapan'i Ummayad ary ny Tempolin'i Hercules. Ity tempoly ity dia natsangana tamin'ny andron'i Marcus Aurelius ary ny sisa tavela aminy dia nanambara fa tempoly voaravaka be izy io.
Ny lapan'ny Umayyad dia trano honenan'andriana izay fonenan'ny governora ary nopotehina tamin'ny horohoron-tany tamin'ny taona 749 AD mba hijanona ho rava mandrakizay. Ny efitrano malalaky ny mpijery miendrika hazo fijaliana sy valindrihana mahafinaritra izay naorin'ireo arkeology espaniola dia mijanona. ny tanky miaraka amin'ny tohatra mankany ambany sy ny tsanganana izay refesina ny haavon'ny rano sy ny Basilika Byzantine tamin'ny taonjato faha-15 sy ny mozika. Misy torolàlana am-peo hitsidihana ny Citadel manontolo, amin'ny JD XNUMX isan'ora.
El Amphitheater romana Naverina tamin'ny laoniny izany. Eo amin'ny sisin'ny havoana iray izy io ary mahazaka olona enina arivo. Inoana fa naorina tamin'ny taonjato faha-50 izy io ary manana fitoerana masina izay nitoeran'ny sarivongana Athena izay ao amin'ny National Archaeological Museum ankehitriny. Naverina tamin'ny laoniny tamin'ny faramparan'ny taona XNUMX fa tsy nisy fitaovana namboarina nampiasaina ka tsy dia tsara loatra. Ny hazavan'ny maraina no tsara indrindra amin'ny fakana sary sy ny hazavan'ny masoandro, tena tsara izany.
Afaka miala sasatra kely azontsika atao mitsidika trano fandroana Tiorka. Eto ny vehivavy dia mandro amin'ny lafiny iray ary ny lehilahy amin'ny lafiny iray. Misy jacuzzis mafana na mafana ary koa sauna mangatsiaka. Mahafinaritra ny traikefa ary miala sasatra be izahay. Ny traikefa tsara iray hafa dia mitsidika fivarotana zava-manitra. Mahagaga ny fofona! Afaka mamofona, manandrana ary mividy zava-manitra tsy manam-paharoa entina mody miaraka aminao ianao. Azonao atao koa ny manandrana matsiro Kafe jordan, misafidiana Tiorka na Saodiana, manandrana ny mezze, mpamatsy sakafo na tapas (falafel, hummus, tabbouleh, fattoush, oliva ...).
El Museum an'ny Royal Car manambara ny tantaran'i Jordania hatramin'ny 20 ka hatramin'izao. Ny fiara dia ireo an'ny mpanjaka teo aloha, nanomboka tamin'ny Mpanjaka Abdullah I, mpanorina ny fanjakana, mandroso. Misy Lincoln Capri 1952, Cord 810 tamin'ny 1936 ary Mercedes Benz 300SL 1955. Ny mpizahatany dia mandoa JD 3 ary misokatra isan'andro ny tranombakoka afa-tsy ny talata, manomboka amin'ny 10 maraina ka hatramin'ny 7 hariva, na dia amin'ny fahavaratra aza dia mihidy ny varavarana amin'ny 9 ora alina.
Ho azy ny Tranombakoka Jordanianina manambara ny tantara ara-kolontsaina ao amin'ny firenena amin'ny alàlan'ny lova manankarena. Eo afovoany, ao Ras al-'Ayn ary raha liana amin'ny lasa ianao, ankehitriny sy ho avy an'ity Fanjakana any Moyen Orient ity dia toerana mahaliana izany. Tandremo sao mikatona ny alatsinainy. ny Tranombakoka arkeolojika Izy io dia manana efitrano fampirantiana, laboratoara fitahirizana, galeriana maro ary fampiratiana vonjimaika izay mifandraika ihany koa amin'ny kolontsaina, lova ary tantara eto amin'ity firenena ity.
Ao anatin'ny roa na telo andro dia afaka mitsidika an'i Amman mora ianao mankafy ny marainany, tolakandro sy alina. Misy trano fisakafoanana sy klioba handihizana, misy kafe sy bar miala sasatra, misotro zava-baovao ary mahatsapa ho anisan'ny tanàna Jordanaana mandritra ny fotoana kelikely. Ary mazava ho azy, raha ny fahafahanao manao izany mihaona amin'i Petra tsy ho diso izany ianao: maharitra 10 ora ny fitsidihana manokana ary miala maraina, amin'ny 7 maraina Petra 225 kilometatra ny halavirana avy any Amman. Manisa 200 $ eo ho eo.
Raha tsy mandeha mitsangatsangana ianao dia afaka mandray bisy ary mividiana ny tapakila ao amin'ny Petra Visitor Center ao Wadi Musa, tanàna akaiky indrindra amin'ny fahasimbana, roa kilometatra miala azy. Tonga any amin'ny rava mandeha an-tongotra ianao na mitaingin-tsoavaly miampita rindrina avo vato, ny Siq. 90 JD ny tapakila iray andro ary raha mijanona ela kokoa ianao, indray alina, dia 50 JD no vidiny. Misy toerana fisakafoanana eny an-toerana ary miaraka amin'ny fidirana dia manome anao sarintany hahitana ilay be pitsiny. Azo antoka fa afaka mitondra ny sakafonao manokana ianao.
Ianao ve mila mijanona ao Petra mandritra ny alina ary hanohy ny fitsidihana ny ampitso? Manana toby ianao, ny Camp Bedouin Fahafito misy farafara 22 euro isan'alina isaky ny olona, ​​ny Hotely Rocky Mountain misy efitrano 19, 44 euro miaraka amin'ny sakafo maraina Arabo na ny Hotel Al Rashid, miaraka amin'ny sakafo maraina sy fifehezana rivotra ary efitrano 16 euro ohatra.
Araka ny hitanao, miaraka amin'ny herinandro latsaka any Amman dia manana carte postale tsara avy any Jordania ianao. Hanampy andro vitsivitsy amin'ny spa any amoron'ny Ranomasina Maty aho hihira ny loteria.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tsangatsangana » Inona no ho hita » Inona no ho hita any Amman, renivohitr'i Jordania
Torohevitra momba ny dia lavitra miaraka amin'ny ankizy